SONATA-CANTATA: ကလေးများအတွက် မြန်မာစာ
ကျွန်တော့် သမီး လက်ရှိတက်နေပါတယ်။ ကျေးဇူးပါပဲ မသီတာ ..
ပညာကုသိုလ်ယူတဲ့ သူတွေရှိလို့ ကလေးတွေ မြန်မာစာ သင်ဖို့ အဆင်ပြေတာ။ သူတို့က မိဘက သင်ရင် သိပ်နားထောင် ချင်ကြတာမဟုတ်ဘူး။
ပြီးခဲ့တဲ့ အပါတ်က ကျောင်းသား ၃၀ လောက်ဖြစ်နေတာ တွေ့လို့ ဝမ်းသာပါတယ်။ ကလေးတွေနဲ့ ရောပြီး ကျွန်တော်တောင် ၃ မိနစ် တရားထိုင်ခဲ့ ရသေးတယ်။ :)
မြန်မာစာကို ကလေးတွေအတွက် သင်ပေးနေတယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာဂုဏ်ယူလိုက်တာ။
၀ိုင်းကူပေးချင်ပါတယ် မမသီတာ။ တတ်လွန်းလို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တတ်သလောက်နဲ့ လုပ်အားပေးချင်လို့ပါ။ ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ... ဘာတွေလိုအပ်လဲ သိချင်ပါတယ်ရှင်။ ညီမဆီကို အီးမေးပို့ပြီး အသေးစိတ်ပြောလို့ ရပါတယ်။
မ ရေ… အရင်က သားကို တိုးပါးရိုးပို့ ဖြစ်တယ်… ခုတော့ နေကုန်ကျောင်းပြောင်းထားဖြစ်လို့သူနေသားမကျခင် ခဏရပ်ထားတာ… လုပ်အားပေးချင်ပါတယ် မ ရယ်… နေရာက နဲနဲဝေးနေလို့ … ကျွန်မက စာသင်တာ ၀ါသနာပါတယ် မ ရဲ့…. မ စာသင်ကောင်းတဲ့ သတင်းတွေက သင်းပျံ့ နေပါတယ်… သားကို ပြန်ပို့ ဖို့ လုပ်နေတာ တိုးပါးရိုးပဲ ပို့ ရင်ကောင်းမလား… နီးနီးနားနား အနောက်ဘက်က ကျောင်းပဲ ပို့ ရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားနေတာ မ ရေ… မ တို့ ကျောင်းလေး မြောက်ဘက်ပြောင်းသွားတာ နှမျောလိုက်တာ… ရ နှစ်အထက်ဆိုတာ ဟုတ်သေးလားဟင်… ရ နှစ်ထက် ငယ်တဲ့ကလေးတွေရော လက်ခံလား…
အတ္တဟိတ ပါတယ်ပဲ ပြောပြော အခုလို ပညာဒါနကို ပုံမှန် အချိန်ပေးပြီး သေသေချာချာ ပြုနေနိုင်တာ သိပ်ကောင်းတဲ့ ကုသိုလ်ပါ။ ကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်သေးတာမို့ သီတာ့ကို သာဓု သာဓု သာဓု လို့ သာဓု သုံးကြိမ်ခေါ်သွားပါတယ်...။
ama, i think it's needed enough time to learn for children.
If that class have time,
children have to recognise all alphabets first,I think.
then, next step..
If I were in there,.. i will join for that class.
ကလေးတွေအတွက် အချိန်ပေးလုပ်ပေးနိုင်တာ ဂုဏ်ယူပါတယ်။
မနုသွဲ့လုပ်ချင်တဲ့ project မှာ မသီတာလည်း အကြံပေးအရာရှိလုပ်ပါလို့ အဆိုပြုပါတယ်။
ကလေးတွေက သင်ချင်စိတ်ရှိလို့လဲ ၀မ်းသာမိတယ်။
ကလေးတွေနဲ့ဆို ပိုတောင် မဖြစ်သေးတယ်။
ကောင်းပါတယ် မနော်လည်း စာသင်တဲ့ဆရာမ
၀မ်းသာစရာ သတင်းပါ။ ကျမအခုနေ နေတဲ့ ဘန်ကောက်မှာလဲ အဲလိုမျိုးလေးတွေရှိရင် ကောင်းမှာ။ ကျမသမီးလေးအတွက် မြန်မာစာ မဖတ်တတ်မှာကို အရမ်းစိတ်ပူမိတယ်။
အားပေးပါတယ် အစ်မ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ကလေးများအတွက် မြန်မာစာကို ကြုံရင်ကြုံ သလို ဆက်ရေးပေးစေချင်ပါတယ်။ သင်ပုံသင်နည်းလေးတွေနဲ့ကိုင်တွယ်ပုံလေးတွေကို လေ့လာချင်လို့ ပါ။
ကိုတင်မင်းထက်ရေ ကော်မန့်အတွက်ကျေးဇူးပါ။ ကိုတင်မင်းထက် ဘလော့ကိုရော၊ သမီး မီးမီးချော ဘလော့ကိုပါ S-Cမှာ လင့်ချိတ်ထားပါရစေနော်။
ကျေးဇူးပါ။ ဝေဖန် အကြံပြုချက်များ ကြိုဆိုပါတယ်နော်။
သင်တန်းမှာ တွေ့မယ်နော် ဆရာမ အသစ်ချပ်ချွတ်လေး
မမြှောက်ပါနဲ့။ အမ အကြောင်းလည်း သိရဲ့သားနဲ့ စိတ်ညစ်ရချေရဲ့ (တွေ့တယ်မို့လား ပြောရင်းဆိုရင်း ဖောက်လာပြီ…)။
၇နှစ်အောက်ကလေးတွေလည်း အကြီးတွေနဲ့ အတူလာရင်း၊ အစပိုင်းတော့ ထမင်းမစား ဟင်းမစား ကျောင်းပျော်လာကြတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ နောက်တော့ သူတို့လည်း စာဝင်သင်ကြပါတယ်။
စိတ်ရှည်တာကတော့… အိမ်က သုံးယောက်ကလွဲရင်ပေါ့ စိတ်ရှည်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါတယ်…
ပြည့်ပြည့်၀၀တော့ မဟုတ်ပါဘူး…မသီတာမှာ လိုအပ်ချက်၊ လစ်ဟင်းချက်တွေ အများကြီးပါ။
ရေးပါမယ် ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီက email - sonata.cantata@gmail.com ကိုလည်း email address လေး ပို့ထားပေးပါ။
yuyusan နဲ့ hmwe ဆီလည်း email ရေးလိုက်ပါပြီနော်
မြတ်နိုးရယ်၊ မီယာရယ်၊ အပြုံးပန်းရယ်၊ မနော်ရယ်က အဝေးသင်ဆရာမတွေ
ကော်မန့်လာရေးမှုဖြင့် မရမက ဆွဲခန့်လိုက်သည်။
ကကြီး ခကွေး ဆရာမ
16 Jul 09, 10:55
Andrew: လာဖတ်ပါတယ်ဗျာ၊ ကျွန်တော် တောင် အက္ခရာနဲ ပတ်သက်တဲ့ ပိူစ့်တစ်ပုဒ် ရေးထားသေးတယ်
16 Jul 09, 11:36
16 Jul 09, 11:37
S-C: mm...ဒီတခါ မိုက်ခရိုဖုန်းလည်း မပါလာပါလား
S-C: ကိုAndrewရေ ဖတ်ရအောင် လင့်လေးပေးပါဦး
16 Jul 09, 12:31
yuyusan: I would like to volunteer for teaching burmese
yuyusan: Pls contact me @ yuyusan@gmail.com
S-C: မယုယုစံရေ ၀မ်းသာလိုက်တာ email ရေးလိုက်ပါမယ်နော်
16 Jul 09, 13:18
S-C: နွေးနေခြည် ဆီလည်း email ပို့မယ်နော်
16 Jul 09, 14:09
Andrew: အခု ပိုစ့်တင်လိုက်ပါပြီ
ဆု: မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်း)
16 Jul 09, 15:55
hmwe: Can i contact you about the volunteer for teaching courses?
16 Jul 09, 15:57
hmwe: I want to know more detail, pls write to me "hmwe02@gmail.com"
S-C: hmwe ရေ email ပို့လိုက်ပါမယ်။ ဒီက emailက sonata.cantata@gmail.com ပါ။